2022 को विश्व कप भकुन्डो प्रतियोगिता कतारमा हुने रे? ~ Khabardari.com
2022 को विश्व कप भकुन्डो प्रतियोगिता कतारमा हुने रे?
11:08 PM Admin 1 comment
क्या यार 2022 को विश्व कप भकुन्डो प्रतियोगिता कतारमा हुने रे कत्तिन हामी नेपालीले प्रत्यक्ष हेर्ने औकात राख्छौँ र? लु अब यसो मन्त्री नेताहरुसँग साँठगाँठ गरेर फिफा पदाधिकारी बनेर जानेलाइ चान्स छ है ऐले देखिनैै । असली खॆलाडी भन्दा नि नेपलाआ त चम्चागिरी गर्नेको चान्स आउच कॆरे । अब तपाइ हामी सोझालाई जे भानी टिलिभिजन मा प्रत्याक्ष प्रसारण जिन्दाबाद त्यो पनि नेपालमा 2022 सम्ममा 24 घन्टे लोड सेडीङ होला भन्ने तराइ लौन लास्टां रेडीयो मा सुन्नुपर्ने हो कि त्यस्तो चै नहोस यार दुख जति नेपाली ले मात्र पाउनुपर्ने कहँ लेख्या छ यार|
जॆ होस खुशिको कुरो नेपाली दाजुभाइले काम पाउने भए है अब कतारमा रोजगारिको अवसर बढ्यो ।
मेनपावरां दले हान्नेले पनि खुब गफ चुटेर मान्छे पट्याउने भए अब कतार जान ।
लु अब हामी नि तेतिन्जेल भकुन्डो खेलाडी तयार गर्न ठुला दलका ठुला नेतालाइ सहमति गर्न अर्को सहमतीको काम दिम न क्यार्चन होला ?
ल ठिक छ दस वर्ष मा कसो खेलकुद मन्त्रि न भइएला लाग्ने हो अब नया पाटी गठन तिर नाक चुचचे मुक्ति मोर्चा (नाचुमुमो) कस्तो लागो पाटी को नाम ..आपुई तेसो गरे कसो होला हिहि हि हि हि ?